Barry Bonds And Steroid Use│Sports News Headlines Global Articles WebSite.WS | Gvmg - ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဗိုင်းရပ်စ်စျေးကွက်ရှာဖွေရေးအဖွဲ့
ငါ Barry Bonds ကိုသံသယ၏အကျိုးကျေးဇူးကိုပေးပြီးအပြစ်ရှိကြောင်းသက်သေပြနိုင်သည့်တိုင်အောင်အပြစ်မရှိဟုယူဆလိမ့်မည်. အများပြည်သူများလွန်းသည် “ကြိုးစားနေသည်” ကြောင့်ဖြစ်ပွားမှု၏ “စွပ်စွဲချက်များ၏လေးနက်မှု” လူတွေကိုကြိုးစားနေကြတယ်, ပြစ်မှုထင်ရှား, နှင့်မီဒီယာအဖွဲ့ဝင်များသို့မဟုတ်နေ့စဉ်နိုင်ငံသားများအားဖြင့်ထောင်ဒဏ်. သို့တိုင်, Barry Bonds ကိုဆန့်ကျင်သောကိစ္စသည်ဆွဲဆောင်မှုရှိပုံရသည်, သူကတစ် ဦး က Grand ဂျူရီမှလိမ်အထူးသဖြင့်ပါ 2003 မိမိအ Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုမှုအကြောင်း, စွပ်စွဲချက်အဖြစ်. ပြစ်မှုထင်ရှားလျှင်, သူထောင်ကျအချိန်ပြုလိမ့်မည်? မဖြစ်နိုင်ဘူး. အဲဒီအစား, ဖြစ်ကောင်းသည်သူ၏စံချိန် expunged နှင့် Bonds အစဉ်အမြဲ Cooperstown ကနေပိတ်ပင်ထားလိမ့်မည်. တစ်ခါတစ်ရံတွင်ထောင်ဖောက်မှုသည်ဥပဒေချိုးဖောက်သူများအတွက်မှန်ကန်သောအပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်. အခြားကိစ္စများတွင်, သူတစ်ပါး၏အမွေအနှစ်များကိုဖယ်ရှားခြင်းသည် ပို၍ သင့်လျော်သောပြစ်ဒဏ်ဖြစ်သည်။ အခြားသူများအားတောင်မှထိုလမ်းကြောင်းကိုသွားရန်မစဉ်းစားရန်ခိုင်မာသောသတင်းစကားပို့သည်. Bonds ကဲ့သို့သောစူပါစတားကိုကြည့်ပြီးသူ့နည်းလမ်းအားလုံးတွင်ကြိုးစားတုပနေသောလူငယ်များအတွက်၎င်းသည်မည်မျှခိုင်မာသည့်သတင်းစကားဖြစ်မည်နည်း။…Steroid တစ်မျိုးအသုံးပြုမှုမှလွဲ။. ဘေ့စ်ဘောသည်လေးနက်သောအုပ်ချုပ်မှုလိုအပ်သည်. ကော်မရှင်နာ၏ရုံးခန်းအပေါ်ဖြစ်ပျက်သောအရာကိုကြီးကြပ်ရန်အလိုတော်မရှိပါက, ထို့နောက်ကွန်ဂရက်ဆက်ဆက်တာဝန်မှထမြောက်ပါလိမ့်မယ်. အစိုးရ ၀ င်ရောက်စွက်ဖက်မှုကိုလူအများကမကျေနပ်ကြပါ, ဒါပေမယ့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဘေ့စ်ဘောသူ့ဟာသူထိန်းညှိလို့မရပါဘူး, ထို့နောက်ပြင်ပအုပ်ချုပ်မှုသည် ပို၍ အရေးကြီးလာသည်. Barry ဘွန်းနှင့် Steroid အသုံးပြုမှု
Posted Articles Title : Barry ဘွန်းနှင့် Steroid အသုံးပြုမှု
■Link To This Post (HTML code) : Barry ဘွန်းနှင့် Steroid အသုံးပြုမှု
■Trackback URL : Barry ဘွန်းနှင့် Steroid အသုံးပြုမှု
စခန်းချ – အိမ်ပြင်မှာရှင်သန်နိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိလား?
ဤနှစ် Davis ဖလားတွင်အမေရိကန်အဘို့ပြုပါနှင့် Don'ts
Brian Urlacher : 2000 နေ့ပုံမူကြမ်း
ဘေ့စ်ဘော Bat Logos
ရေငုပ်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်အံ့မခန်းဖွယ်ဝါသနာဖြစ်နိုင်သည်, နှင့်များစွာသောလူသည်ယခုအခါကမ္ဘာ့အကောင်းဆုံးအစက်အပြောက်အချို့အတွက်ရေငုပ်ရန်အထူးသဖြင့်အားလပ်ရက်သွားပါ ‘ သြစတြေးလျရဲ့ဂရိတ်အတားအဆီး, ဥပမာ, သို့မဟုတ်တောင်အမေရိက၏ Galapagos ကျွန်းများ, အခြားသူများအကြား. ဒီရေငုပ်နေရာတွေမှာတူညီတဲ့အဏ္ဏဝါတိရိစ္ဆာန်တွေပါ, ငါးမန်းတစ် ဦး အထူးသဖြင့်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်ခြင်းနှင့်အတူ, ရောင်စုံသန္တာနှင့်အခြားစိတ်ဝင်စားဖွယ်အဏ္ဏဝါအပင်များ. ရေငုပ်ရန်, ပထမ ဦး ဆုံးသင်ကအရည်အချင်းရှိတဲ့နည်းပြဆရာ၊. ရေငုပ်ရန်ရှည်လျားသောခရီးကိုမသွားခင်သင့်တိုင်းပြည်တွင်ရေငုပ်ခြင်း၏အခြေခံကိုလေ့လာခြင်းသည်ကောင်း၏, သင်အနည်းဆုံးကြိုတင်စဉ်းစားထားလျှင်သင်ဘာလုပ်နေတယ်ဆိုတာကိုသင်ထူးခြားသောနေရာများတွင် ပို၍ ပျော်စရာကောင်းလိမ့်မည်. လူကြိုက်အများဆုံးရေငုပ်အားလပ်ရက်များသည်များသောအားဖြင့် 'live-boards' ဖြစ်သည်။, ဆိုလိုသည်မှာသင်သည်ရေငုပ်သင်္ဘောပေါ်တွင်သင်ခရီးစဉ်တစ်ခုလုံးအတွက်နေထိုင်သည်ကိုဆိုလိုသည်. ဤသည်ကသင့်အားနေရာထိုင်ခင်းနှင့်ရေငုပ်ခြင်းစရိတ်သက်သာစေသည်, နေဖို့ထူးခြားတဲ့နေရာတစ်ခုဖြစ်သကဲ့သို့. သို့သော်, အလင်းသွားလာရန်သတိထားပါ, လှေပေါ်မှာ ဦး ဆုံးလှည့်လည်ကြည့်ပါ ဦး၊ ‘ သငျသညျပြုလျှင်သင်တစ် ဦး တိုက်ရိုက်သင်္ဘောပေါ်တွင်မပျော်စရာရှိသည်လိမ့်မယ်. ရေငုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်လျှင်သတိထားရမည့်အခြားအရာများစွာရှိသည်. တစ်ခုအတွက်, သင်မြန်လွန်းမတက်ဖို့သေချာစေရန်လိုအပ်သည်, ရေဖိအားရုတ်တရက်ပြောင်းလဲခြင်းသည်ကိုယ်ခန္ဓာကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်သောကြောင့်ဖြစ်သည်. သင်ငုပ်နေသောရေ၏အပူကိုလည်းသတိပြုရန်လိုအပ်သည် (ကခန္ဓာကိုယ်အပူချိန်ကနေအကြီးအကျယ်ကွဲပြားခြားနားမဖြစ်သင့်ပါတယ်), ရေစိုခံသတ္တ ၀ ါများနှင့်အပင်များကသင့်ကိုဆိုးဝါးသောခြစ်ရာများကျရောက်စေခြင်းကိုရှောင်ကြဉ်ရန်အတွက် wetsuit ကိုဝတ်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍. သော်လည်းအလွန်အမင်းစိတ်မပူပါနဲ့: နေသမျှကာလပတ်လုံးသင်ကောင်းတစ် ဦး ရေငုပ်ကျောင်းကိုကောက်အဖြစ်, သင့်ရဲ့နည်းပြဆရာကသင်နဲ့အတူအန္တရာယ်အားလုံးကိုသေသေချာချာလေ့လာသင့်တယ်, သူတို့ကိုသင်ရှောင်ရှားရန်သင်လိုအပ်သည့်ကိရိယာများနှင့်ဗဟုသုတအားလုံးကိုသင့်အားပေးရမည်. ရေငုပ်ခြင်းသည်အမှန်တကယ်ပင်အံ့မခန်းဖွယ်ဝါသနာဖြစ်နိုင်သည်
ဂေါက်သီးလွှဲကိုက်ညီမှုသည်ဂေါက်သီးသမားတိုင်း၏ပန်းတိုင်ဖြစ်သည်. ၁၉ ကြိမ်မြောက်မှာသင်ပြောနေတဲ့တစ်သန်းလောက်ကိုရိုက်မယ်ဆိုတာမင်းသိတယ်။ ဒါပေမဲ့ဒီရိုက်ချက်ကိုပိုပြီးမကြာခဏဖြစ်အောင်လုပ်ရတာနဲ့ပါတ်သတ်ပြီး? ဂေါက်သီးရိုက်ရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုအတွက်ရှုထောင့်များစွာသည်အလွန်ကြီးမားပြီးကြည့်။ မရနိုင်ပုံပေါက်စေနိုင်သည်။ သို့သော်ဂေါက်သီးတိုင်းစဉ်းစားသင့်သည့်အချက်တစ်ချက်ရှိသည်။, ကြောင်းဂေါက်သီးလွှဲကိုက်ညီမှုအပေါ်သိသိသာသာသက်ရောက်မှုရှိလိမ့်မည်. ဂေါက်သီးသမားများသည်အပတ်တိုင်းဘောလုံးရာပေါင်းများစွာထိမှန်သည်ကိုငါတို့သိသည်. သူတို့ကအချို့သောအောင်မြင်မှုနှင့်အတူသင်ခန်းစာယူပါ, ဒါပေမယ့်မဟုတ်ပါဘူး 100% ကျေနပ်မှု. ကလပ်အသစ်တွေဝယ်ရတာပျော်တယ်, ဒါပေမဲ့သူတို့ကတကယ်တော့ခြားနားအောင်လုပ်ခဲ့တာပဲ? မင်းရဲ့ရမှတ်ကိုလျှော့ချခဲ့သလား 4-6 လေဖြတ်? ပိုမိုမြင့်မားသောဂေါက်သီးလွှဲကိုက်ညီမှုရရှိရန်ကြိုးစားသောအခါ, စက်မှုအစိတ်အပိုင်းကစားရန်အတွက်လာပါတယ်. သို့သော်အနည်းငယ်နက်ရှိုင်းစွာတူးခြင်းသည်သင့်ကိုအမှန်တကယ်ရရှိစေပါလိမ့်မည်’ သင့်ရဲ့ဂေါက်သီးလွှဲရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုသင်၏မရှိခြင်းမှဖြေပါ. ဒါကြောင့်ပိုပြီး balls'or နှိပ်မဟုတ်ပါကဖြစ်နိုင်သည်ဘယ်အရာကိုပိုပြီးပစ္စည်းကိရိယာများကိုဝယ်ယူရန်ပိုမိုသင်ခန်းစာများသို့မဟုတ်? အဘယ်အရာကိုအပေါ်လုပ်ကိုင်ဖို့ကျန်ရစ်ရဲ့? ငါနွေးနေပြီလား? ငါဒီနှင့်အတူသွားဘယ်မှာသင်အောက်ပါနေကြသည်? အရာရာတိုင်းဟာကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့အရာတစ်ခုကိုဖယ်ရှားလိုက်ပြီ? ငါတို့မလုပ်ခဲ့ဘူး! တစ်ခုသာကျန်တော့သည်! မင်းရဲ့ခန္ဓာကိုယ်! သင်၏ 'ဂေါက်သီးစက်'. သင်၏ဂေါက်သီးလွှဲရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုနှင့်စွမ်းအားကိုတိုက်ရိုက်နီးပါးသက်ရောက်မှုဖြစ်စေနိုင်သည်. သင်ဂေါက်ကွင်းပေါ်တက်လိုက်တဲ့အခါ, သင့်ရဲ့ဂေါက်သီးလွှဲစဉ်အတွင်းသင့်ခန္ဓာကိုယ်ထိထိရောက်ရောက်ရွေ့လျားကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါသလား? သင်တင်းမာမှုအနည်းဆုံးနှင့်အပြည့်အဝအလှည့်နိုင်တယ်လို့ခံစားရသလား? သင်၏ဂေါက်သီးတစ်လုံးလုံးအတွက်ဟန်ချက်ညီညီနေနိုင်သလား 18 တွင်း? သငျသညျ '' သွားရရန် above'it ရဲ့အချိန်မဆိုမှမဖြေလျှင်!’ ဒါဟာ '' ဂေါက်သီးအားကစားသမားဖြစ်လာဖို့အချိန်ပါပဲ!’ သင်သည် tee box ထဲသို့မတက်တော့ဘဲပုံပန်းသဏ္ဌာန်တူသည်ဟုခံစားရတော့မည်မဟုတ်ပါ, ပြီးပြီ. သငျသညျယုံကြည်မှုတစ်ခုအပြင်းအထန်ပိုမိုမြင့်မားသောအဆင့်ကိုရပါလိမ့်မယ်, နှင့်သင်၏ဂေါက်သီးစွမ်းဆောင်ရည်ကပြသပါလိမ့်မယ်. သင်သည်သင်၏ခန္ဓာကိုယ်ပိုကောင်းရွေ့လျားရတဲ့အခါ, သင်၏ဂေါက်သီးလွှဲစက်နှင့်ဂေါက်ရိုက်လွှဲမတူညီမှုသည်သဘာဝကျလိမ့်မည်. သင်ကအကြောင်းထုတ်အလေးပေးရန်မလိုအပ်ပါ. သငျသညျသွားခွင့်နှင့်ကစားနိုင်ပါတယ်. သင်၏ဂေါက်သီးတိုးတက်မှုအတွက်ချဉ်းကပ်မှုအသစ်တစ်ခုအတွက်အချိန်ရောက်လာပြီဖြစ်သည်! စွမ်းဆောင်ရည်အသစ်နှင့်ဂေါက်သီးလွှဲရှေ့နောက်ညီညွတ်မှုကိုသင်ရောက်ရှိမည်. ဂေါက်သီးကစားခြင်း၏လျှို့ဝှက်ချက်
ရေနက်ပိုင်းငါးဖမ်းခြင်းသည်အလွန်ကောင်းမွန်ပြီးအလွန်ပျော်စရာကောင်းသောလှုပ်ရှားမှုဖြစ်သည်. သင်၏ဆားငန်ရေငါးဖမ်းခြင်းလုပ်ငန်းကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေမည့်အကြံဥာဏ်များကိုဤတွင်ဖော်ပြထားသည်. 1. သငျသညျငှက်များကိုကြည့်ပါလျှင်နိမိတ်လက္ခဏာများကိုကြည့်ရှုပါ. ငါးစာသေးသေးလေးများစားသောပင်လယ်စာများ, ရေမျက်နှာပြင်အောက်တွင်ပိုမိုကြီးမားသောဂိမ်းအမျိုးအစားငါးများရှိနိုင်သည်. ဒါ့အပြင်, ရေပေါ်သစ်သားသို့မဟုတ်အပျက်အစီးများကိုရှာဖွေပါ. အများဆုံးကိစ္စများတွင်သင်ကြီးမားသော floating သစ်သားအပေါ်သို့အခွင့်အလမ်းသည့်အခါ, သငျသညျလင်းပိုင်ကြုံတွေ့ရပင်gameရိယာ၌ကြီးမားသောဂိမ်းငါးရှာတွေ့လိမ့်မယ်. 2. ရပ်, Snook and Listen Fishing for snooks is quite similar as fishing for bass. Snooks like to be around ledges, posts and rocks. 3. Crabs for full moon During full moons use soft crab imitations as bait. That’s the time when crabs shed their shells and stripers come looking for them. 4. If you’re looking for tunas, find the dolphins Yellowfin tuna are usually found schooling with dolphins. So if you seeagroup of dolphins, chances are there are some tuna in the area. 5. Cut and Burn If you have trouble cutting throughaspiderwire braid, try usingalighter oramatch. 6. Good Reef The best place to fish is near reefs since big game fish feed on fish that live on reefs. 7. The Circle Hook Useacircle hook if you would likeahigher hook up ratio. These hooks guarantees more catch, because of the minute gap, and the reverse point. They are generally better for the fish since they do not hook in the gut just the lip. 8. Don’t have sea legs Watch the horizon and stay on deck. These would generally help you if you’re having trouble with sea sickness: Stay away from the boat fumes, breathing it only exacerbates the problem. 9. Anchors away When your anchor is stuck at the bottom, try attachingafloat to it. Return after the tide has changed in direction. This should be enough to loosen the anchor. 10. Fish where the fish are A lot of fisherman have the idea that they should be catching their live baits over the reefs before going to deep waters. If the live baits are not in the area you’re planning to catch the larger games, then why would you come up with the idea that the large fish are there. Wouldn’t they be in the area where the bait fish are? နက်ရှိုင်းသောပင်လယ်ငါးဖမ်းရန်အချက်များ
မင်းအိမ်ကိုသွားလို့ရအောင်သွားမယ်လို့စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်, သင်မည်မျှဒုက္ခဖြစ်နိုင်သည်ကိုသင်သဘောပေါက်။ မရပေလိမ့်မည်. အဲဒီအစား, ယေဘုယျအားဖြင့်အားကစားရုံတစ်ခုသို့ဝင်ရန်ပိုမိုလွယ်ကူသည်. အားကစားခန်းမကောင်းတစ်ခုသည်ဈေးအပေါဆုံးလမ်းလျှောက်စက်များပတ်လည်တွင်ရှိသည်, သင်အားသာချက်ယူရန်အဘို့ထိုအရပ်၌အပိုဇိမ်ခံအင်္ဂါရပ်များနှင့်အတူ. သူတို့ကဖြစ်စေအာကာသအပေါ်ကန့်သတ်ထားမည်မဟုတ်ပါ, ဆိုလိုတာကသူတို့မှာမော်ဒယ်များရှိနိုင်ပြီးအဆင်ပြေစွာလည်ပတ်နိုင်အောင်တစ်ဖက်မှတစ်ဖက်သို့အနည်းငယ်လမ်းလွဲစရာမလိုဘဲအဆင်ပြေစွာလည်ပတ်နိုင်မည်ဖြစ်သည်. သငျသညျအလေးအနက်ထားသင်၏ပြေးယူလျှင်, နှင့်တစ် ဦး treadmill သုံးပြီးသင်၏လေ့ကျင့်ရေးအချို့လုပ်နေလိမ့်မည်, အခြားအားသာချက်တစ်ခုအားကစားရုံများတွင်အိမ်သွားလမ်းများပေါ်တွင်ရှိသည် - သူတို့လုပ်နေတာကိုသိသောအရည်အချင်းပြည့်ဝသောနည်းပြဆရာများကိုပေးသည်. သင်ပြေးနေမည့်အခြေအနေများကိုအနီးကပ်ထင်ဟပ်နိုင်အောင်သူတို့ကပြေးစက်ကို set up လုပ်နိုင်သည်, ဘယ်လောက်ပြေးရမလဲဆိုတာကိုအကြံပေးပါ၊. အိမ်မှာပါ, သင်ရုံဤအရာတို့ကိုသင်ကိုယ်တိုင်အဘို့အထွက်တွက်ဆရန်ရှိသည်လိမ့်မယ်. သငျသညျမထိုက်မတန်ရဖို့အပြေးစက်ကိုအသုံးပြုသည်ဖြစ်စေ၊, အားကစားခန်းမသို့သွားခြင်း၏လူမှုရေးဘက်ကိုလျှော့တွက်။ မရ. အဲဒီမှာလူတိုင်းကဲ့သို့တူညီသောရည်မှန်းချက်များဆီသို့ ဦး တည်အလုပ်လုပ်သည် ‘ လေ့ကျင့်ခန်းများနှင့်ကြံ့ခိုင်ရေး ‘ နှင့်ဘုံအတွက်အကျိုးစီးပွားအဖြစ်ရှိပါတယ်, မိတ်ဆွေကောင်းတွေဖွဲ့ပြီးတစ်ယောက်ကိုတစ်ယောက်အားပေးပြီးအရှုံးမပေးဖို့ကြိုးစားနိုင်တယ်. အားကစားခန်းမသို့အချိန်ကြာမြင့်စွာလာခဲ့ကြသောလူများကိုတွေ့ရခြင်းသည်ထိုတွင်သွားခြင်း၏ကြီးမားသောအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်, ၎င်းသည်သင့်အားသင်အောင်မြင်အောင်မပြုလုပ်မီကြာမြင့်စွာလုပ်ဆောင်နေသည့်အရာ၏ရလဒ်များကိုသင်တွေ့မြင်စေသည်. ဒါဟာအားလုံးလှုံ့ဆျောမှုအကြောင်းကိုပါပဲ ‘ ပြီးနောက်အားလုံး, သင်ရုံအိမ်မှာထိုင်နေလျှင်, နှင့်ဆိုဖာသင့်ရဲ့ treadmill ဘေးမှာရှိပါတယ်, အဘယ်သူသည်သွားစောင့်ရှောက်ရန်သင့်အားလှုံ့ဆော်မယ့်ပါတယ်? သငျသညျအလေးအနက်ထားပြေးယူပါသလား?
လွန်ခဲ့သောနှစ်အနည်းငယ်ကကျွန်ုပ်သည်ငါးစာကိုတိုက်ရိုက်အသုံးပြုခဲ့သည်. ထိုအချိန်မတိုင်မီကကျွန်ုပ်သည်တီကောင်များကိုသုံးခဲ့သည်. ဟုတ်တယ်၊ တီကောင်တွေကလည်းငါးစာတွေပဲ, ဒါပေမယ့်အသက်ရှင်သောငါးစာ၏ကမ္ဘာကြီးကိုချိတ်ပေါ်တွားတတ်သောထက်အများကြီးပိုပါတယ်. Minnows, မြဝတီ, နှင့်ပုရစ်ကိုလည်းငါးစာတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှ၏အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်. ငါအမျိုးအစားတစ်ခုချင်းစီကိုအသုံးပြု။ ပျော်မွေ့ခဲ့သည်, ဒါပေမယ့်ပုရစ် '' အခြားကမ္ဘာသို့ငါပထမ ဦး ဆုံးအကျိုးတူခဲ့ကြသည်’ တိုက်ရိုက်ငါးစာငါးဖမ်း၏. ကျွန်တော့်သူငယ်ချင်းကောင်း, တွမ်, ရေချိုငါးမျှားသည့်အခါပုရစ်ကိုဘယ်လိုအသုံးပြုရမည်ကိုပထမ ဦး ဆုံးပြသခဲ့သည်. Kyburz ရဲ့ဘေးထွက် Silver Fork ကိုငါးဖမ်းတာရောက်နေပြီ, ကယ်လီဖိုးနီးယား. အဆိုပါရေပြေးခဲ့သည်နှင့်ရှုခင်းထူးချွန်. ကျွန်ုပ်တို့၏အစီအစဉ်မှာအထက်မှကျောက်သားများကိုခုန်ရန်နှင့်စီးဆင်းနေသောကျွန်ုပ်တို့၏လမ်းကိုငါးဖမ်းရန်ဖြစ်သည်. အစီအစဉ်၏ပထမ ဦး ဆုံးပုရစ်ကိုငါးစာအဖြစ်ကျွန်ုပ်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်. တွမ်ကခရစ်ကက်လှောင်အိမ်ထဲကအနက်ရောင်ပုရစ်ကိုဆွဲထုတ်ပြီးပြောလိုက်သည်, '' မင်းကကော်လာအောက်မှာချိတ်ကိုသာဖွင့် '. ဘာလဲ? ဒီကရစ်ကုတ်အင်္ကျီတစ်ထည်ဒါမှမဟုတ်တစ်စုံတစ်ခုတပ်ထားတယ်? ခရစ်ကက်ခေါင်း၏နောက်ကွယ်တွင်ကော်လာပုံနှင့်တူသည်ကိုကျွန်ုပ်တွေ့ရှိခဲ့သည်. အဆိုပါလှည့်ကွက်ပုရစ်မသတ်ဘဲကော်လာအောက်မှာနှင့်အခြားတစ်ဖက်ခြမ်းမှသင်၏ချိတ်ကိုညင်သာစွာလမ်းပြရန်ဖြစ်သည်. ဒါဟာတကယ်ဖြစ်နိုင်တာထက်အသံပိုမိုလွယ်ကူသည်. နောက်တော့ငါငါးဖမ်းစက်သွားပြီးတွမ်ချက်ချင်းပဲဆုံးမလိုက်တယ်. Bobber မလိုအပ်ပါဘူး, တစ် ဦး နစ်၏အပေါ့ပါးဆုံး. အယူအဆမှာစီးဆင်းနေသောရေထဲသို့ပစ်ချခြင်းနှင့်ခရစ်ကက်ကိုစီးဆင်းစေခြင်းဖြစ်သည်. ခရစ်ကက်ဆရာကကျွန်တော်လေ့လာပြီးသူကသူ့လိုင်းကိုရေပေါ်ညင်သာစွာလှန်လိုက်ပြီးခရစ်ကက်ကချောင်းထဲကိုမျောနေတယ်. ထို့နောက်သူသည်သွားပြီဖြစ်သည်. ငါးမျှားပါ! ထို အချိန်မှစ၍ လူအများစုသည် Panfish နှင့် Breen အပါအ ၀ င်အခြားငါးမျိုးစုံအတွက်ပုရစ်ကိုအသုံးပြုကြသည်ကိုကျွန်ုပ်သိရှိခဲ့ရသည်. ဒီနည်းစနစ်ကကျွန်မရဲ့ပထမ ဦး ဆုံးနေ့ကိုသုံးခဲ့တဲ့နည်းလမ်းနဲ့မတူဘူး. လူတော်တော်များများဟာဘော့ (bobber) တစ်ခု၊ #6, #8, ဒါမှမဟုတ် #10 ချိတ်. ထို့နောက်သူတို့ကပေါ့ပါးသောအုပ်စုခွဲပုံကိုရိုက်ကြသည်6ပုရစ်ကနေလက်မ. ရည်ရွယ်ချက်မှာခရစ်ကက်ကိုဖြည်းဖြည်းနှင့်သဘာဝကျကျရေထဲသို့စီးဆင်းစေရန်ဖြစ်သည်. Panfish လိုပဲ, သင်အကြိမ်ပေါင်းများစွာကြိုးစားပါလိမ့်မည်။ သင်မှန်ကန်တဲ့နေရာကိုရှာသည့်တိုင်အောင်သင့်ရဲ့ bobber depth ကိုချိန်ညှိနိုင်သည်. ငါးတွေဟာသူတို့ရဲ့အစာအမျိုးမျိုးကိုကြိုက်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိခဲ့ရတယ်, ငါတို့လိုပဲ. တိုက်ရိုက်ငါးစာကိုငါးထက် ပို၍ အတုပြုလုပ်ထားခြင်းကြောင့်၎င်းတို့သည်ပြင်းထန်စွာထိုးနှက်နိုင်သည်. ဒါကြောင့်ပိုးကောင်များကိုတိုက်ရိုက်ငါးစာစားရန်လေ့လာပါ. ခရစ်ကက်: အခြားတိုက်ရိုက်ငါးစာ. ခရစ်ကက်: အခြားတိုက်ရိုက်ငါးစာ
Boxing is one of the oldest sports that are played throughout the world. It is at the very roots of the American civilization. Men used to fight each other with bare knuckles in bars since the first immigrants came over from Europe. Later these boxing matches were cleaned upalittle bit and boxing gloves were introduced. နှစ်ပေါင်းများစွာအတွက်, boxing matches were only performed by men. However about ten years ago women’s boxing started to appear in the mainstream. One of the most famous women’s boxers that blazedatrail for the women of today was Christy Martin. Christy Martin helped to bring media attention toasport that was not getting very much coverage until she broke into the ring. She was signed by infamous boxing promoter Don King in the early 1990s, and she made the most of the opportunities he gave her. She mainly fought as an undercard on the Mike Tyson matches, but she often stole the show. She brought much media attention to women’s boxing when she fought Deirdre Gogarty on Showtime in 1996. During this fight she had her nose broken in the early rounds by Gogarty. However she continued to fight hard and won the fight. I remember this fight very well and I gained much respect for Martin during this fight, because even though she tookabeating early, she never gave in and ended up winning the fight byaunanimous decision. This match wasamajor turning point in women’s boxing, because the entire mainstream sports media now starting covering her fights. Christy continued to fight and win for about ten more years, until she was confronted withabout with Laila Ali. Laila Ali is famed boxing legend, Muhammad Ali’s daughter. Ali overmatched Martin and knocked her out in the fourth round. After this match the torch was past from Martin to Ali as the woman to lead women’s boxing into the next generation. However we can never forget about Christy Martin’s tremendous contributions that she gave to women’s boxing. Women’s Boxing Has Made Huge Strides
ကွဲပြားခြားနားသောငါးများနှင့်ငါးဖမ်းပုံစံများအတွက်မတူညီသောငါးဖမ်းရန်လိုအပ်သည်. ငါးဖမ်းလှေများသည်ငါးဖမ်းကိရိယာ၏အဓိကအစိတ်အပိုင်းဖြစ်သည်. သို့သော်, ထုတ်လုပ်သူများနှင့်အမျိုးမျိုးသောငါးဖမ်းလုပ်ငန်းအမျိုးအစားများစွာရှိသည်, မင်းအတွက်အကောင်းဆုံးတစ်ခုဆိုတာမင်းဘယ်လိုသိနိုင်မလဲ. အဓိကအားဖြင့်သုံးမျိုးရှိသည် ‘ လှည့်ဖျား Casting, ငါးစာသတ္တုများပုံသွန်း, နှင့်အားလုံးချည်ငင်သူတို့ရဲ့အကောင်းအဆိုး cons ရှိသည်. သင်လိုအပ်သောအမျိုးအစားသည်သင်မည်သည့်ငါးဖမ်းခြင်းအမျိုးအစားပေါ်တွင်မူတည်သည်. ပထမဆုံးငါးဖမ်းပိုက်ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်စိတ်ပျက်စရာဖြစ်နိုင်သည်, အထူးသဖြင့်သူတို့ reel ၏စတိုင်သည်သင့်အတွက်အသစ်ဖြစ်သည်. အစပြုသူများသည်မကြာခဏမျက်နှာပိတ်ထားသော reel ဖြင့်စတင်သည်. လူကြိုက်အများဆုံးစတိုင်ဖြစ်ကောင်း spin-cast သို့မဟုတ် spinning reel. ဤအရာများနှင့်အတူဒူးထောက်သည်လှံတံအောက်တွင်ချိတ်ထားသည်. တိုက်ပွဲကိုထိန်းချုပ်ရန်အတွက်ကြိုးကိုသံချပ်ချပ်နှင့်အာမခံခလုတ်ဖြင့်ထိန်းချုပ်ထားသည်. သတ္တုများပုံသွန်းနည်းနည်းအလေ့အကျင့်ကြာပါသည်, သို့သော်သင်၏လက်ညှိုးကိုချပစ်ခြင်းမပြုမီလက်ကိုင်ကိုဆန့ ်၍ မျဉ်းကြောင်းကိုနှိပ်ထားပါကလိုင်းသည်ချောင်းဆိုးခြင်းမှကာကွယ်နိုင်သည်. အခြားတစ်ဖက်တွင် Baitcasting သည်တိကျမှန်ကန်ရန်နှင့်လိုင်းရှုပ်ထွေးမှုများကိုရှောင်ရှားနိုင်ရန်အတွက်မျှတသောအလေ့အကျင့်တစ်ခုလိုအပ်သည်. သင်လိုင်း၏တင်းမာမှုကိုထိန်းချုပ်ကျွမ်းကျင်ရမည်. ဤသို့ပြုလုပ်ရန်အတွက်ဆွဲဆောင်ခြင်း၏အလေးချိန်ကိုမျဉ်းပေါ်ရှိတင်းမာမှုနှင့်နောက်ဆုံးတွင်သင်၏သွန်းခြင်း၏စွမ်းအားနှင့်ကိုက်ညီရန်လိုအပ်သည်. သို့သော်သင်လုပ်သည်နှင့်တပြိုင်နက်, သူတို့သည်အလွန်ပျော်စရာကောင်းပြီးအလွန်တင်းကျပ်သောနေရာများတွင်အလွန်တိကျမှန်ကန်သောသွန်းလောင်းခြင်းကိုခွင့်ပြုသည်. ဤအကြောင်းကြောင့်တစ် ဦး တည်းအနေဖြင့်၎င်းတို့သည်ရေငတ်နေသောငါးဖမ်းသမားများနှင့်လူကြိုက်များသောရွေးချယ်မှုတစ်ခုဖြစ်သည်. ငါးဖမ်းပိုက်အမျိုးအစားသုံးမျိုးလုံးကိုလေ့လာခြင်းသည်သင်ငါးဖမ်းသည့်အချိန်တွင်သင့်အားကြီးမားသောအားသာချက်တစ်ခုပေးလိမ့်မည်. သင်၏ reel နှင့်အခြားငါးဖမ်းကိရိယာများကိုသင်၏အမျိုးအစားနှင့်လိုက်ဖက်ခြင်းဖြင့်သင်သည် ပို၍ အောင်မြင်လိမ့်မည်. ငါးဖမ်း Reel အခြေခံ
တောအုပ်ထဲကိုသင်ခြေကျင်လျှောက်လာခဲ့လျှင်သင်လမ်းလျှောက်တုတ်သည်မည်မျှလွယ်ကူသည်ကိုသင်သိသည်. လမ်းလျှောက်နေစဉ်သင်၏ခြေထောက်နှင့်ဒူးကိုဖိစီးမှုသက်သာစေရန်ဤချောင်းများကိုပြုလုပ်သည်. သင်ပင်ပန်းနေချိန်မှာသင့်ကိုရွေ့လျားနေစေဖို့သူတို့ကအထောက်အကူပြုတယ်. လမ်းလျှောက်တုတ်များသည်ပုံစံအမျိုးမျိုးနှင့်အရွယ်အစားအမျိုးမျိုးရှိကြသည်. မင်းရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်အတွက်လမ်းလျှောက်တုတ်ကိုသင်ရရှိနိုင်ပါတယ်. ဤအရာများကိုမသန်စွမ်းသူများထံပေးပြီးတစ်ခါတစ်ရံတုတ်တစ်ချောင်းသာလိုအပ်သည်. ယင်းတို့ကိုများသောအားဖြင့်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားပြီးကားလက်အိတ်တွင်တပ်နိုင်သည်, လက်ကမ်းစာစောင်, ဒါမှမဟုတ်ပိုက်ဆံအိတ်. နောက်ထပ်လမ်းလျှောက်တုတ်အမျိုးအစားမှာလူအများသွားလာသည့်အရာဖြစ်သည်, သစ်သားတချောင်းကိုသူတို့လမ်းပေါ်တွင်တွေ့ရှိခဲ့သည်. အကယ်၍ သင်လမ်းကြောင်းပေါ်ရှိနေစဉ်လမ်းလျှောက်သောချောင်းကိုလုပ်ရန်ဆုံးဖြတ်ပါကချောင်းထဲတွင်ရှာဖွေရန်အရေးကြီးသောအရာများရှိသည်. ပထမ, လုံးဝဖြောင့်သောချောင်းကိုရှာပါ. လမ်းလျှောက်နေစဉ်မည်သည့်မျဉ်းကြောင်းကမဆိုသင်၏ဟန်ချက်ကိုကိုင်တွယ်နိုင်သည်. သင်တည့်တည့်ဖြောင့်ဖြောင့်ဖြောင့်တန်းကိုရှာပြီးနောက်၎င်းသည်သင့်အလေးချိန်ကိုထောက်ပံ့ရန်နှင့်သင့်လက်၌သက်သောင့်သက်သာရှိစေရန်သေချာအောင်လုပ်ပါ. ဤအမှုကိုပြုသောပြီးနောက်သင်က fit ရန်လုံလောက်သောရှည်လျားပေမယ့်ခက်ခဲသောမဖြစ်သေချာပါစေ. သင်ကအကောင်းတစ် ဦး သည်အထိသည်အထိ၏အရှည်ကိုချိုးဖျက်ဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုရင်. နောက်ထပ်လမ်းလျှောက်သည့်တုတ်အမျိုးအစားသည်သင်၏ပုံမှန်သစ်သားသို့မဟုတ်သတ္တုဖြောင့်တုတ်ဖြစ်သည်. ဤရွေ့ကားကိုသုံးသူအများအပြားခြေကျင်းနှင့်ခြေပြandနာများရှိသည်သို့မဟုတ်စဉ်ဆက်မပြတ်လမ်းလျှောက်အတွက်အကူအညီလိုအပ်လိမ့်မည်. ၎င်းတို့ကိုလူတစ် ဦး ချင်းစီ၏လိုအပ်ချက်နှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်စေပြီးဂရုစိုက်လျှင်ကြာရှည်လိမ့်မည်. လမ်းလျှောက်တုတ်နှင့်သင်မည်သည့်လိုအပ်သည်ဖြစ်ပါစေသင်၌ရှိသည့်တစ်ချိန်တည်းတွင်၎င်းကိုသယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ကြောင်းအမြဲသတိရပါ. တစ်ခါတစ်ရံတွင်လမ်းလျှောက်တုတ်များကိုသင် ပို၍ မလိုအပ်ဘဲလုပ်နိုင်သည်၊ သင်အမှန်တကယ်မလိုအပ်သည့်အခါ၎င်းကိုဆက်လက်သယ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်. လမ်းလျှောက်တုတ်: အလွန်အသုံးဝင်သောကိရိယာတစ်ခု!
အွန်လိုင်းလှည်းလှော်ခြင်းသည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ကြီးမားသောလမ်းကြောင်းတစ်ခုဖြစ်လာသည်. လှည်းလှည်းသည်စိတ်လှုပ်ရှားမှုနှင့်ပျော်စရာများကိုပေးရုံသာမကဘဲ, ဒါပေမယ့်ကြီးမားတဲ့ဆုအနိုင်ရကြီးမြတ်အခွင့်အလမ်းတွေကို. ဒါပေမယ့်, အခြားမည်သည့်ဝါသနာသို့မဟုတ်စိတ်အားထက်သန်မှုနှင့်ဝသကဲ့သို့, ၀ င်ရောက်လာသူများသည်အွန်လိုင်းလှည်းချည်းမှုအတွေ့အကြုံ၏တစိတ်တပိုင်းဖြစ်ရန်ဟောပြောချက်ကိုပြောနိုင်ရမည်. အွန်လိုင်းချွေတာမှုများပြုလုပ်သည့်အခါ ၀ င်ရောက်သူများအကျွမ်းတ ၀ င်ရှိသင့်သောသိထားသင့်သည့်ဝေါဟာရအချို့ရှိသည်. entries တွေကိုသက်ဆိုင်သောအရေးကြီးအသုံးအနှုန်းများဖြစ်ကြသည်: 1/H သည်ဆိုလိုသည်မှာအိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်တစ်အိမ်နှုန်းနှင့် ၁ / H / D သည်တစ်ရက်အိမ်ထောင်စုတစ်ခုဖြစ်သည်, 1/H / W ဆိုသည်မှာတစ်ပတ်လျှင်အိမ်ထောင်စုတစ်စုလျှင်တစ်အိမ်နှုန်းဖြစ်သည်, 1/H / M ဆိုသည်မှာတစ်လလျှင်တစ်ကြိမ်နှင့် ၁ / H / Q ဆိုသည်မှာသုံးလတစ်ကြိမ်သို့မဟုတ်သုံးလတစ်ကြိမ်နှုန်းဖြစ်သည်. 1/P သည်လူတစ် ဦး လျှင်တစ် ဦး တည်းအတွက်အတိုဖြစ်သည်. ပြီးတော့, အထက်တွင်ရှင်းပြသည်အဖြစ်, /: D, /W, /M နှင့် / Q တို့ကိုအချိန်အကန့်အသတ်အဖြစ်ထည့်သွင်းနိုင်သည်. နောက်ထပ်အချိန်နှင့်ဆက်စပ်သောလှုပ်ခြင်းအသုံးအနှုန်းသည်တစ်ပတ်လျှင်နှစ်ကြိမ်ဖြစ်သည်, ဆိုလိုတာက ၀ င်ရောက်သူများသည်နှစ်ပတ်တစ်ကြိမ်ဝင်ရောက်နိုင်သည်. Addy (သို့) အက်ဒီသည် ၀ င်ရောက်သူများ၏လိပ်စာကိုရည်ညွှန်းသည်. အသုံးများသောအသုံးအနှုန်းလေးခုသည် NAZ ဖြစ်သည်, နာဇီ, နာဇနှင့် NAZT. N ဆိုသည်မှာအမည်စာရင်းနှင့်အမည်ကိုဆိုလိုသည်, A ဆိုသည်မှာ entrants address နှင့် Z သည် entrants zip code ကိုဆိုလိုသည်. အပို DT သည်တစ်ရက်တယ်လီဖုန်းအတွက်တိုသည်, H ဆိုသည်မှာအိမ်ဖုန်းနှင့် T ကိုတယ်လီဖုန်းနံပါတ်ဆိုသည်. ပြိုင်ပွဲနှင့်ပတ်သက်။ သို့မဟုတ်အွန်လိုင်းလှည်းခွဲစိတ်ကိုယ်တိုင်ကနှင့်ပတ်သက်။, အောက်ပါဝေါဟာရများအထောက်အကူဖြစ်စေပါလိမ့်မယ်. SD ဆိုသည်မှာစတင်ရက်စွဲကိုဆိုလိုသည်, ပြိုင်ပွဲများ၏လှည်း၏တရားဝင်စတင်ရက်စွဲ. အွန်လိုင်း ၀ င်ရောက်ခြင်းဆိုသည်မှာအင်တာနက်အသုံးပြုခြင်းအားနည်းလမ်းကိုဆိုလိုသည်. WL သည်ဆုရရှိသူစာရင်းနှင့် DD ကိုပုံဆွဲနေ့စွဲအတွက်ဆိုလိုသည်, သောအွန်လိုင်းလှည်းအဘို့အ entries တွေကို၏လက်ခံမှု၏နောက်ဆုံးသောနေ့ရက်သည်. E / F / A ဆိုသည်မှာ ၀ န်ထမ်းများကိုဆိုလိုသည်, မိသားစုများနှင့်အေဂျင်စီများ, ဝင်ရောက်သူများ၏အရည်အချင်းပြည့်မီကိုရည်ညွှန်းသည်. အခြားအသုံးများသောအသုံးအနှုန်းများမှာအွန်လိုင်းလှည်းလှော်ခြင်းတွင် WSL နှင့် DOB ဖြစ်သည်. WSL ဆိုသည်မှာစတော့ရှယ်ယာများကြာရှည်နေပြီး DOB သည်မွေးဖွားသည့်နေ့အတွက်တိုတောင်းနေစဉ်ကိုဆိုလိုသည်. နောက်လူကြိုက်များသောအသုံးအနှုန်းမှာတရားစီရင်ရေးအဖွဲ့ကိုကိုယ်စားပြုသော J / A ဖြစ်သည်. ပြိုင်ပွဲကြီးများစွာတွင်တရားသူကြီးများကိုအေဂျင်စီများကို အသုံးပြု၍ သူတို့၏ချွေတာမှုများကိုထိန်းချုပ်သည်. P / C ဆိုသည်မှာစျေးနှုန်းများကိုသတ်မှတ်ထားသောရက်စွဲတွင်ဖော်ပြရမည်ဖြစ်သည်. အကယ်၍ အောင်မြင်သူများသည်သတ်မှတ်ထားသောအချိန်ကာလတစ်ခုအတွင်း၎င်းတို့၏ဆုများကိုမတောင်းဆိုပါက, သူတို့ဆုလက်လွှတ်ဆုံးရှုံး. ပုံမှန်အွန်လိုင်းလှည်းအလှည့်ဝင်သည့်အခါ, ဝင်ရောက်လာသောသူများသည်မကြာမီချွေတာသုံးစွဲခြင်းဆိုင်ရာဝေါဟာရများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ဖြစ်လာလိမ့်မည်. ၀ င်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်သူများအနေဖြင့်အွန်လိုင်းလှည်းလှယ်ခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သောဝေါဟာရများအကြောင်းပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်သောဝေါဟာရများနှင့် ၀ ဘ်ဆိုဒ်များစွာရှိသည်. ၀ င်ရောက်သူများသည် ၄ ​​င်းတို့စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်အကျွမ်းတဝင်ရှိရန်သေချာသည်, ဝေါဟာရအသုံးအနှုန်းနှင့်ပြိုင်ပွဲများသို့မဟုတ်အွန်လိုင်းလှည်းလှဲခြင်းဆိုင်ရာအခြားအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုသူတို့မ ၀ င်မီ. ဝင်ရောက်လာသောသူများသည်အွန်လိုင်းလှည်းချပ်များအသုံးအနှုန်းများနှင့်ရင်းနှီးကျွမ်းဝင်သောအခါ, သူတို့တတ်နိုင်သလောက်များစွာသောသိမ်းဆည်းမှုများဝင်နိုင်ပါတယ်? နှင့်ဆုကြီးစွာသောဆုအနိုင်ရကြီးမားတဲ့အခွင့်အလမ်းရပ်တယ်! အွန်လိုင်းချွေတာရေးဝေါဟာရ
Acrylic ဆုပေးပွဲ,ဆုဖလား,မုံရွာခရိုင် & Corporate လက်ဆောင်များကိုအစဉ်အမြဲတန်ဖိုးထားရမည်. သူတို့ကအချို့အောင်မြင်မှုများအတွက်ချီးမြှင့်နိုင်ဘူး, သို့မဟုတ်အဖွဲ့ဝင်တစ် ဦး memento, ဒါမှမဟုတ်ဖြစ်ရပ်တစ်ခုကနေအမှတ်တရပစ္စည်း. ဆုဖလား & ဆုများအဖြစ် Mementoes အထူးကျောင်းများအတွက်အထူးသဖြင့်ဘုံဖြစ်ကြသည်, အားကစားနှင့်ရုံးအောင်မြင်မှုများ. ပညာရေးဆိုင်ရာဆုများကိုမတူညီသောအတန်းများနှင့်ဘာသာရပ်ကျွမ်းကျင်မှုများအတွက်ဆုဖလားများပေးအပ်သည်. အားကစားအောင်မြင်မှုများအတွက်ဆုဖလားလူကြိုက်အများဆုံးဖြစ်ကြသည်. တင်းနစ်ကစားနည်း, ဘောလုံး, ဘတ်စကက်ဘော, ခရစ်ကက်နှင့်ဂေါက်သီးအားလုံးသည်ဆုဖလားများကိုလိုချင်ခဲ့ကြသည်. အားကစားသမားများပျော်ရွှင်စွာငိုကြွေးပြီးကြိုးစားအားထုတ်သောဆုများကိုဆုပ်ကိုင်ထားသည့်ဓာတ်ပုံများကိုမည်သူမျှမေ့နိုင်မည်မဟုတ်ပါ. တစ်ခါတစ်ရံစီးပွားရေးရည်မှန်းချက်များအောင်မြင်ရန်သို့မဟုတ်သင်တန်းအစီအစဉ်များတက်ရောက်ရန်အတွက်ဆုဖလားများကိုတစ်ခါတစ်ရံပေးလေ့ရှိသည်. ၎င်းတို့ကိုအထက်တန်းလွှာအသင်းများနှင့်အသင်းအဖွဲ့များသို့လည်းပေးအပ်သည်. ကျေးဇူးတင်လေးမြတ်ခြင်းနှင့်အားပေးခြင်း၏သင်္ကေတကျွန်တော်တို့ဟာကလေးငယ်လေးတစ်ယောက်လိုတောင်အားပေးမှုရလိုကြတယ်. ဘယ်အလုပ်ပဲလုပ်လုပ်, နောက်ကျောအပေါ် pat အမြဲကျွန်တော်တို့ကိုတက် pepped. ကျောင်းအားကစားပွဲတွေမှာဒီဆုဖလားလေးတွေကိုမှတ်ထားပါ? ဒါမှမဟုတ်သိပ္ပံပရောဂျက်ကိုအနိုင်ယူဖို့အလုပ်လုပ်ထွက်? Gitanjali ဆုချမှတ်ခြင်းနှင့်ဒီဇိုင်းကွဲပြားခြားနားနိုင်ပါတယ်. တချို့ကုမ္ပဏီတွေကထုံးစံဆုဖလားကိုဆက်ကပ်, အရာသီးသန့်ဒီဇိုင်းဆုဖလားသို့မဟုတ်အထူးသဖြင့်ဖြစ်ရပ်များဖြစ်ကြသည်, လူများနှင့်အခါသမယ. ဥပမာ, အော်စကာဆုသည်အော်စကာဆုအတွက်အထူးပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်. ဒါပေမယ့်,စိတ်ကြိုက်ပြုလုပ်နိုင်ခြင်းကဆုဖလားကိုထူးခြား။ တန်ဖိုးရှိစေသည်. များသောအားဖြင့်၎င်းသည်အရေးကြီးသောကုန်ကျစရိတ်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်ဒီဇိုင်း၏လိမ္မာပါးနပ်. ကုမ္ပဏီအများစုသည်ရောင်းအားအများဆုံးအရေအတွက်ရရှိရန်အကောင်းဆုံးအရောင်းအဖွဲ့ကဲ့သို့သောဌာနတစ်ခုစီတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ဆုများရှိသည်, အကောင်းဆုံးနည်းပညာအဖွဲ့နှင့် ၀ န်ထမ်းများပင်။ သစ်နှင့်သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအကောင်းဆုံးထုံးစံဆုဖလားများကိုအလွယ်တကူရနိုင်သည်. သင်၏ကုမ္ပဏီတံဆိပ်, အနုပညာလက်ရာများနှင့်သင်ရှာဖွေနေသည့်မည်သည့်အခြားအမှတ်တံဆိပ်မဆိုလုံးလုံးတွင်လေဆာဖြင့်ထွင်းထားသောလေဆာဖြင့်ထွင်းထားသည်. သို့သော်မည်သည့်အရာကမျှထွန်းလင်းတောက်ပပြီးသတ္တုဆုတစ်ခု၏အရောင်တောက်ပမှုကိုမကျော်ဖြတ်နိုင်ပါ. လူငယ်ဆင်နွှဲသောဒီဇိုင်းများ, အရာစွမ်းဆောင်ရည်နှင့် exuberance epitomize, အတော်လေးဘုံဖြစ်ကြသည်. ကျေးဇူးတင်ပါတယ်, လေးပုံတစ်ပုံ၏ကြယ်နှင့်ကမ္ဘာ၏အမှတ်အသားသည်လူကြိုက်များသောဆုဖလားဒီဇိုင်းများဖြစ်သည်. Gitanjali ဆုများသည် Acrylic Awards ၏ကျယ်ပြန့်သောအတိုင်းအတာကိုဖန်တီးပေးသည်,ဆုဖလား,မုံရွာခရိုင် & ကော်ပိုရိတ်လက်ဆောင်များ. * အသိအမှတ်ပြုမှုအတွက် & Talent ၏ဆုလာဘ် & အောင်မြင်မှုများ. * ကိုယ်စားလှယ်များအဘို့,ဂုဏ်ပြုည့်သည်များ & အခြားသူများကညီလာခံများတွင်ပါဝင်, ကော်ပိုရိတ်, ယဉ်ကျေးမှု & အားကစားပွဲများ. Gitanjali ဆုနောက်ဆုံးပေါ်ဖြတ်တောက်ခြင်းနည်းပညာများကိုအသုံးပြု။ ၎င်းတို့၏အထူးလိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအမျိုးမျိုးသောဖောက်သည်များအတွက်အလုပ်အကိုင်များကိုကွပ်မျက်ခြင်းအတွက်အထူးပြု http.For သတင်းအချက်အလက် logon http မှ://www.gitanjaliawards.com အထူး * CNC ဖြတ် & လေဆာရောင်ခြည် Mementoes. * စိတ်ကြိုက်လုပ်ဒီဇိုင်းများ * ထူးခြား, Multicolor ဒီဂျစ်တယ်ပုံနှိပ်နည်းပညာ Acrylic မျက်နှာပြင်. * သင်၏ပုံရိပ်ကိုပိုမိုကောင်းမွန်စေသည့်ဆွဲဆောင်မှုရှိသောမျက်လုံးခုံးပုံစံများ . * သပိတ်မှောက်ကြည့်. * မှော်ကိုဖန်တီးသောကြော့ဒီဇိုင်းများ. သင်၏အောင်မြင်မှုများအတွက်ပြီးပြည့်စုံသောပြသမှု
အဓိကဂေါက်သီးစွမ်းအား, ဂိမ်း၏ဝါသနာရှင်များအဖို့မသိသောသင့်ခန္ဓာကိုယ်အတွင်းရှိကြွက်သားများအားအေးမြစေပြီးအားဖြည့်ပေးသည်, သင်ဂေါက်သီးကစားရန်အသုံးပြု. အားနည်းခြင်းနှင့်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးသောဤအဓိကဂေါက်သီးအားကစားသည်, အားနည်းချက်ကသင့်ရဲ့ဂေါက်သီးကစားနည်းပါ. သို့သော်မည်သည့်ကစားသမားမဆို၎င်း၏အဓိကဂေါက်သီးအားသည်အဘယ်ကြောင့်ဖြစ်သင့်သည်ကိုရှင်းပြကြပါစို့, အပျော်တမ်းသို့မဟုတ်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ရှိမရှိ. ဂေါက်သီးကစားခြင်းတွင်လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက်သဘာဝမဟုတ်သောလှုပ်ရှားမှုများပါဝင်သည်. ဤသည်မှာဂေါက်သီးလွှဲခြင်းသည်ကျွမ်းကျင်ရန်ခက်ခဲသောအကြောင်းရင်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့မင်းကအကောင်းဆုံးကိုကြိုးစားပြီးကြိုးစားပြီးသော်လည်းကောင်း၊, သဘာဝ; သင်၏ခန္ဓာကိုယ်နှင့်ကြွက်သားများ၏သဘောထားများသည်သင်၏ကြိုးပမ်းမှုများကိုဆန့်ကျင်သည်. ထို့ကြောင့်၎င်းကြွက်သားများကိုလေ့ကျင့်ရန်နှင့်အခြေအနေကောင်းရန်ဂေါက်သီးအကန့်အသတ်နှင့်သာကိုင်တွယ်ရန်သူတို့ကိုအားဖြည့်ပေးသောကြောင့်၎င်းသည်အဓိပ္ပာယ်များစွာရှိသည်, လှုပ်ရှားမှုသင်ပိုမိုသဘာဝကျကျလာလိမ့်မယ်. မရှောင်လွှဲနိုင်သောရလဒ်မှာသင်၏ဂေါက်သီးကစားနည်းသည်သိသိသာသာတိုးတက်လာလိမ့်မည်. ပြီးတော့ဒါကအဓိကဂေါက်သီးအားကိုလေးစားမှုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်. ဂေါက်သီးသမားအများစုကအဓိကဂေါက်သီးစွမ်းအားသည်အခြားအရာတစ်ခုဖြစ်သည်ဟုယုံကြည်ကြသည်. ဒီတစ်ခါလည်းလွှဲ technique ကို, သို့မဟုတ်ပင်အတွေ့အကြုံ. ရလဒ်အနေနှင့်၎င်းတို့၏ဂေါက်သီးကစားခြင်းသည်မှားယွင်းသောအဓိကဂေါက်သီးအားကိုးအားထားပြုရန်ကြိုးစားရုန်းကန်နေရသောကြောင့်တစ်နေ့တာတွင် ပို၍ စိတ်ရှုပ်စရာဖြစ်လာသည်။, သူတို့ရဲ့ဂိမ်း၏အရည်အသွေးပေါ်. အဓိကအကြောင်းရင်းမှာဂေါက်သီးအားအစွမ်းအားကိုအများအားဖြင့်ရှောင်ကြဉ်ခြင်း (သို့) လျစ်လျူရှုခြင်းသည်အပျော်တမ်းကစားသမားများစွာသည်လေ့ကျင့်ခန်း၏အတွေးမျှသာကိုကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်. ချွေးများနှင့်တင်းကြပ်သောလေ့ကျင့်ခန်းများယိုယွင်းခြင်း၏အတွေးသည်လူကြီးလူကောင်းတို့၏ဂိမ်းဟုခေါ်ဝေါ်ကြသူများစွာအတွက်ကြောက်စရာဖြစ်သည်. အလွန်ကြောက်စရာကောင်းသည့်အတွက်သူတို့သည်လေ့ကျင့်ခန်း၏သဘောသဘာဝနှင့်နောက်ကြောင်းပြန်ပြproblemsနာများရှိသည့်သက်ကြီးရွယ်အိုများကသူတို့ကိုအဘယ်ကြောင့်ဤမျှကောင်းမွန်စွာစီမံခန့်ခွဲရကြောင်းအသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုရှာဖွေရန်ခက်ခဲခြင်းမရှိသဖြင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်နာကြည်းခြင်းကဲ့သို့သောနာကျင်မှုအချို့ကိုဖယ်ရှားပစ်နိုင်သည်။. ဤရွေ့ကားများစွာသောအားဖြင့်ဒီ core ကိုဂေါက်သီးအားအစွမ်းသတ္တိကိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ကျန်ရှိနေရတဲ့အကြောင်းရင်းအချို့ကိုဖြစ်ကြသည်. အဓိကဂေါက်သီးစွမ်းအားသည်သင်၏ဂိမ်းကိုတိုးတက်စေလိမ့်မည်
The World Series of Poker is the most anticipated and crowning event in the world of poker. It’s been around for so long and its history has been clouded by its popularity that people tend to forget just how great the WSOP was when it first started. Over the past couple of years, thousands of people have been trying to cashaquick buck off its popularity, and hundreds of web sites have suddenly popped up, but despite all of this the WSOP has been around when poker was considered serious card playing. It wasn’tafad that was made to be televised into some sort of fashion. It was quality poker. နောက်ကျောသောနေ့၌, men smoked cigars and sipped whisky while eyeing up their opponents. It wasagame made for men like Nicolas Dandolos, commonly referred to as Nick the Greek, and Benny Binion. These two were champion gamblers and poker players back during the 1940s. It was no wonder then when Nick the Greek approached Binion to set upaworld class match. Nick challenged the supposed champion of all poker players, Johnny Moss. Binion agreed to the plan and he set up the match between Dandolos and Moss. There was one exception though, Binion made sure to attract as much attention to the event as possible by holding it in public. It was to be on public display and seen asamarathon. After five long months of discussion and compromises, all parties agreed to continue with the match. ထို့ကြောင့်, the World Series of Poker was born in 1949. It wasagrueling event where the players only took breaks to catch up on sleep. Moss came out on top and reportedly took home around $2 million in cash, nearly an entire casino’s worth in 1949. နီးပါး 21 years later, Binion decided to try his hand with the WSOP again. It was 1970, and this time he officially deemed it the WSOP. And once again, Johnny Moss did what he does best and walked away with the pot. By now Binion knew he had something particularly special in the poker world. He continued the World Series of Poker yearly from then on. အားဖြင့် 1982, there were 104 top poker players signed up for the WSOP. Now in 2006, at the height of the poker craze, everyone believes he or she is the next gift to poker. Last year, there were 5,619 people entered into the main event. This year, the numbers are predicted to be over 8,000 entrants. The size of the WSOP has changed, but the quality has not. It is the biggest, most anticipated poker tournament for any poker player. A Little History on the World Series of Poker
ယပ်လှေလို, သင်ရေဖြူကိုအမြဲတမ်းမလည်ပတ်ချင်ဘူး. တစ်ခါတစ်ရံ, သငျသညျကလွယ်ကူသောယူ။ အချို့သောငါးဖမ်းလုပ်ချင်တယ်. သင်သည်သင်၏ kayak မှငါးဖမ်းရန်စီစဉ်ပါက, သငျသညျအခြို့သောလိုအပ်သောဂီယာနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများလိုအပ်ပါလိမ့်မယ်. Kayak ငါးဖမ်းကိရိယာသည်စျေး ၀ ယ်ရန်လွယ်ကူပြီးအသုံးပြုရလွယ်ကူသည်! သင်၏ငါးဖမ်းခြင်းခရီးစဉ်ကိုပိုမိုချောမွေ့ပြီးစနစ်တကျဖြစ်စေရန်သင်အမျိုးမျိုးသောကိရိယာများကိုသင်တွေ့လိမ့်မည်. Access bar သည်သင်ဝယ်ယူရမည့်ပထမဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းဖြစ်သည်. The bar attaches to either side of your kayak and is where you can hold your fishing rod and GPS system, if you own one. Serious fishers also often invest in seats. You will probably find yourself sitting in your kayak for long stretches of time. Seats will come in handy during these times. Bait tanks and anchors are two other fishing-gear requirements. When you find that hot fishing spot, you know you want to stay there, which will make your anchor come in handy! Bait tanks are excellent if you fish for minnows. Depending on the style of fishing you are practicing, you may or may not need these items. Fishing gear is essential, especially because you are fishing fromasmall boat. The key to this is to make sure everything is as organized and compact as possible. This will help you feel that you have plenty of room and, ထို့ကြောင့်, much more comfortable. Gear for kayaks is designed with organization and practical use in mind. You will find some awesome gadgets for your new kayak fishing adventure! Convert your kayak intoaprofessional fishing boat with onlyafew accessories that can add fun to your fishing trip. You will soon be able to combine two of my favorite pastimes – fishing and kayaking – and be havingagreat time. You will be able to find such fishing gear at online kayak and fishing retailers. သင်၏ကယက်လှေမှငါးဖမ်းခြင်း? ဤတွင်သင်လိုအပ်နိုင်ပါသည်အချို့ဂီယာဖြစ်ပါတယ်
နံပါတ်တစ် Nfl မူကြမ်း Pick ခုနှစ်တွင်ရှိသည်ဖို့သွားမယ့်သူကိုခန့်မှန်း 2007
ကြှနျုပျတို့မှာ9အဆိုပါ NFL ရာသီသို့ဂိမ်းများနှင့်ကအကြောင်းပြောနေတာစတင်ရန်အချိန်ပါပဲ 2007 NFL မူကြမ်းနှင့်မည်သည့်အသင်းများကိုထိပ်ရွေးမှာရိုက်ချက်ရှိသည်. ပိုကောင်းသေးတယ်, ငါရလိမ့်မည်ဟုအဘယျသို့အသင်းကိုသင်ပြောပြသွားတယ် #1 လာမည့်အတွက်ရွေး 2007 NFL မူကြမ်း. စလိုက်ကြစို့. ပထမ, ရဲ့ထိပ်တန်းမူကြမ်း Picks များအတွက်အလားအလာပစ်မှတ်များမှာအသင်းများကိုကြည့်ကြကုန်အံ့ 2007 NFL မူကြမ်း. 2006 အလွန်ဆိုးရွားကစား၏ရာသီဖြစ်ခဲ့သည်. အဆိုပါလိဂ်အထက်တန်းလွှာအသင်းများနှင့်တကယ်မကောင်းတဲ့အသင်းများကိုအကြားခွဲခြားထားတယ်. – ကျွဲမှာ 3-6 – ဟူစတန်မှာ 3-6 – မိုင်ယာမီမှာ 3-6 – Oakland မှာ 2-7 – မှာရှိ Pittsburgh 3-6 – ကလိဗ်လန်မှာ 3-6 – Tennessee ပြည်နယ်မှာ 2-7 – ဝါရှင်တန်မှာ 3-6 – မှာ Tampa ဂလားပင်လယ်အော် 2-7 – ဒက်ထရွိုက်မှာ 2-7 – အရီဇိုးနားမှာ 1-8 ဒါပါပဲ 11 ရှိသည်အသင်းများ3အနိုင်ရသို့မဟုတ်ထိုထက်နည်းယခုရာသီ. ဒီမှာကျွန်တော့်ရွေးချယ်မှုပါ: အဆိုပါအရီဇိုးနား Cardinal. အဘယ်ကြောင့်? အဆိုပါ Cardinal ဖြစ်ကြသည် 1-8 စတင်သူများအတွက်. နောက်တစ်ခု, သူတို့မှာရှိတယ်3သူတို့ရဲ့နောက်ဆုံး၏7စစျမှနျသော PLAYOFF ပြိုင်ဘက်ဆန့်ကျင်ဂိမ်းများ (SD, THE, ပင်လယ်). သူတို့မှာရှိတယ်2မင်နီဆိုတာနှင့်စိန့်အတွက်လျောက်ပတ်သောအသင်းများကိုဆန့်ကျင်သူတို့အားဂိမ်း၏. လူးဝစ်. သူတို့အားဂိမ်းနှစ်ခုလုံးလမ်းပေါ်မှာ. ဒါကဖြစ်နိုင်ချေရှိသောနှစ်ဘက်အောင်ပွဲခံဆန်ဖရန်စစ္စကိုနှင့်ဒက်ထရွိုက်တွင်ကျန်နေသည်. အဆိုပါ 49ers ဂိမ်းလမ်းပေါ်မှာလည်းဖြစ်ပါတယ်. အရီဇိုးနားအလွန်ကောင်းစွာပြီးအောင်နိုင်ဘူး 1-15, 2-14 ဒါမှမဟုတ် 3-13 အကောင်းဆုံး. ဒါဟာသူတို့ကိုအချိန်ဇယားပေးထားမဆိုပိုကောင်းလုပ်နေတာစိတ်ကူးဖို့ခဲယဉ်းပါတယ်. Tennessee ပြည်နယ်ကသူတို့ကိုသော်လည်းပြေးကြလိမ့်မည်. သူတို့ရဲ့ကျန်ရှိနေသေးသောအချိန်ဇယားကခက်ခဲသည်, ဒါပေမဲ့သူတို့ရှိသည်2အနိုင်ရတဲ့ဂိမ်း left နှင့်တက်နိုင်ဘူး 4-12. Oakland များအတွက်အရှိန်အဟုန်အပေါ်လည်းဖြစ်ပါတယ် 3-13 ဒါမှမဟုတ် 4-12. ဒက်ထရွိုက်တွင်အချို့သောအနိုင်ရနိုင်သောဂိမ်းများကျန်ရှိနေပြီး၎င်းတို့သည်လေတိုက်နိုင်သည် 5-11. Tampa ဂလားပင်လယ်အော်နှင့်အတူတူပင်. Redskins ဒုက္ခရောက်နေသည်, ဒါပေမယ့်သူတို့ရှိသည်ကတည်းက3အနိုင်ရရှိပြီးဖြစ်သည်, သူတို့ဖြစ်ကောင်းယခုရာသီ 5-8th ရွေးရလိမ့်မယ်. ပြိုင်ပွဲထိပ်ရွေးများအတွက်အပေါ်ဖြစ်ပါတယ်. အရီဇိုးနားကရလိမ့်မယ်? အဲဒါတောင်မှအရေးမကြီးဘူး? အချိန်ကစကားပြောပါလိမ့်မယ်. ၎င်းသည်ဤအသင်းများထဲမှတစ်ခုဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်၏ပိုက်ဆံသည်အရီဇိုးနား Cardinal တွင်ဖြစ်သည်. နံပါတ်တစ် Nfl မူကြမ်း Pick ခုနှစ်တွင်ရှိသည်ဖို့သွားမယ့်သူကိုခန့်မှန်း 2007
Nitro Powered ကားများ
နောက်ထပ် RC အမျိုးအစားမှာ nitro စွမ်းအင်သုံးမော်ဒယ်များဖြစ်သည်. ငါတို့အားလုံးနိုက်ထရိုဂျင်စွမ်းအင်သုံးကားများသည်မြန်ဆန်ကြောင်းဝါသနာရှင်များအများစုကသိကြသည်’ နိုက်ထရိုကားများကိုမကြာခဏလျှပ်စစ် RC ကားများပေါ်တွင်ရွေးချယ်ရခြင်းအကြောင်းအရင်း. ဒါပေမယ့်သင်တန်း၏, ဒီဟာအစပြုသူတွေအတွက်စံပြကားမဟုတ်ပါဘူး. လွန်းလျှပ်စစ် powered မော်ဒယ်များနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ, nitro ကားများသည်ပြိုင်ဆိုင်သင့်သည်ကိုတကယ့်ခံစားချက်ပေးသည်. နှစ်တွေ, ပိုမိုကောင်းမွန်။ အကျိုးရှိစွာလည်ပတ်နိုင်ရန်အတွက်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုကိုတိုးတက်အောင်လုပ်ခဲ့သည်. နိုက်ထရိုကားများကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းခြင်းတို့တွင်အားနည်းချက်များစွာရှိသည်. တိုတောင်းသောပြေးပြီးနောက်အမှိုက်ကိုအလွယ်တကူစုဆောင်းနိုင်ပြီးကား၏ကိုယ်ထည်သည်ပုံမှန်သန့်ရှင်းရေးလုပ်ရန်လိုအပ်သည်. ဒါ့အပြင်, nitro စွမ်းအင်သုံးကားများကိုထိန်းသိမ်းရန်နောက်ထပ်လိုအပ်ချက်တစ်ခုမှာ၎င်းကိုစနစ်တကျညှိနှိုင်းသင့်သည်. Nitro ကားများသည်လောင်စာဆီများစွာမသုံးစွဲဘဲထိပ်တန်းအခြေအနေနှင့်အမြန်နှုန်းတွင်လုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်သည်. သင့်လျော်သောညှိမှတဆင့်, ဤအမျိုးအစားများကိုအပူလွန်ကဲစေသည်. လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးကားများနှင့်နှိုင်းယှဉ်, ဘက်ထရီစွမ်းအင်သုံးကားတစ်စီးသည်ပြေးလမ်းတစ်ခုသို့ရောက်ရှိနိုင်သည် 10 မိနစ်ထိပ်များနှင့်ထို့နောက်ဘက်ထရီကိုထပ်မံအားသွင်းရန်လိုအပ်သည်; နိုက်ထရိုကားများသည်ကြာရှည်စွာမောင်းနှင်နိုင်သည်. nitro စွမ်းအင်သုံးကားလေးပိုင်းခွဲခြားထားပြီး၎င်းတွင်အထူး nitro fuel ပါဝင်သည်, မြင့်မားသောမြင်းကောင်ရေအင်ဂျင်, ညှိအိပ်ဇောနှင့်လေ filter ကိုများအတွက်ပိုက်အစားထိုးနိုင်ပါတယ်. ဤရွေ့ကားအစိတ်အပိုင်းများကိုသန့်ရှင်းရေးနှင့်ဤပစ္စည်းများကိုလျစ်လျူရှုလျှင်ကြောင့်ပုံမှန်စစ်ဆေးမှုများအတွက်အရေးကြီးလှသည်; ဖြစ်နိုင်သမျှစက်မှု wear ဖြစ်ပျက်နိုင်ဘူး. ဘေးကင်းလုံခြုံမှုဆိုင်ရာကြိုတင်ကာကွယ်မှုတစ်ခုမှာတိုက်မိခြင်းခံရသည်. အရှိန်မြှင့်နေစဉ်အမြန်နှုန်းနှင့်စွမ်းအားများကြောင့် Nitro ကားများသည်အခြား nitro ကားများနှင့်တိုက်မိနိုင်လေ့ရှိသည်. စစ်မှန်သောစမ်းသပ်မှုမလုပ်မီနိုက်ထရိုကားများနှင့် ပတ်သက်၍ လုံခြုံရေးအစီအမံများကို ဦး စွာသတိပြုရန်အရေးကြီးသည်. ယေဘူယျအားဖြင့်, ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုတွေအများကြီးတောင်းဆိုတဲ့အတွက်နိုက်ထရိုကားတွေဟာပိုပြီးအာရုံစိုက်ဖို့လိုတယ်; ကြီးစွာသောဂရုစိုက်မှုနှင့်ကိုင်တွယ်လျှင်မူကားသင်အဖြစ်ကောင်းစွာ၎င်း၏စွမ်းဆောင်ရည်အာမခံနိုင်ပါတယ်. Nitro Powered ကားများ